10 qof oo Soomaali u badan oo maxkamad lagu soo taagay Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ilaa 10 ruux oo 9 ka mid ah Soomaali yihiin, lalana xiriirnayo Al-Shabaab ayaa mar kale la horkeenay maxkamad ku taalla Magaalada Kambala ee xarunta dalka Uganda.
Dadkaan ayaa booliiska dalka Uganda xireen bishii September ee sannadkii hore ee 2014.
Isniintii, ayay dadkaan ka soo hormuuqdaan Maxkamadda, waxaana 9-ka qof ee Soomaalida ay laba ka mid ah yihiin hablo.
Eedeysanayaasha, ayaa waxaa dib loogu celiyay xabsiga Luzira, waxaana lagu wadaa in lagu sii haayo ilaa 19-ka January.
Al-shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda laba weerar oo lagu dilay 76-qof oo magaalada Kampala ka dhacay sannadkii 2010-kii, dadkaasoo intooda badan ahaa kuwo daawanayay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee Koobkii adduunka ee sannadkaas lagu qabtay dalka Koonfur Afrika.